Ngo inqubo yokwelapha yesimanje, wamathumbu isimiso ubhekwa izifo ezivame kakhulu ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu. Lesi sifo kuhambisana ukwahluleka ukunyakaza okuqukethwe emathunjini ngenxa yokucinana, ukuvaleka noma yesikhashana ukuphazamiseka peristalsis.
Wamathumbu isimiso: Izimbangela kanye ngezigaba
isifo okunjalo kungenziwa labizwa ngesisekelo izizathu ngendlela. Ezamukelwe ukunikeza izinhlobo ezintathu isimiso - mechanical, semithambo futhi iyaguquka. Ake sihlole ngokuningiliziwe.
1. isimiso Mechanical - lolu hlobo isifo lihlotshaniswa ezahlukahlukene zangaphakathi nezangaphandle. Ngokwesibonelo, ingaphakathi ingavuthi avimbekile ngaphakathi ikholoni amatshe fecal, izimila, nemizimba angaphandle ukuthi ngandlela-thile singena umzimba. Ngaphezu kwalokho, isimiso bungabangela ecindezela wamathumbu izinhlumba ngaphandle, izimila, amahlule, njll Wamathumbu isimiso ezinganeni, ezimweni eziningi ngenxa ukwakheka ukuvuvukala noma invaginations.
2. Functional (okuguqukayo) ukuvimbela - lesi sifo ukungasebenzi e kwemizwa imisipha elawula odongeni emathunjini, kuphumele eqinile kwenzeka noma spasm, noma ukukhubazeka okuphelele. isimiso Spasmodic ezimweni eziningi kwenzeka ezinye izinto poisoning (ubuthi, esindayo zensimbi). Ukukhubazeka odongeni wamathumbu angagcina nge appendicitis acute, pancreatitis, futhi ngemva kokuhlinzwa izitho zomzimba besisu.
3. Umhlinzi occlusion isifo kishechnika- okwenzeka thrombosis of emithanjeni yegazi odongeni emathunjini.
Izimpawu wamathumbu ukuvimbela
Uphawu oyinhloko walesi sifo, yebo, kuyinto, ubuhlungu eqinile zibuthuntu ngezikhathi inyuka futhi cramping ngokwemvelo.
Iziguli ngokuvamile kokukhononda futhi ukuvuvukala, ukuqunjelwa kanye nezinye izinkinga ne isihlalo, kanye kumiswa anda futhi ukubuyisa. Iziguli nazo bahlushwe ukuhlanza okuqukethwe amile.
Ileus: izindlela ukuxilongwa kanye nokwelashwa
Uma usola khona lesi sifo kufanele ngokushesha ukuletha umuntu esibhedlela. Ngemva kokuhlola jikelele kanye palpation esiswini udokotela angase kakade usola khona i isimiso. Kamuva aphethwe ezihlukahlukene izifundo, kuhlanganise ukuhlolwa laboratory, x-ray kanye ultrasound izivivinyo.
Ngokuqondene ukwelashwa, bona ngqo zincike imbangela. Ngokwesibonelo, uma isimiso kwabangelwa isimiso semithambo, ubuthi noma ngezinye zezifo ezithathelwanayo, into yokuqala okudingeka aphathe it. Ngesikhathi esifanayo, iziguli babelwa ukuthola amaphilisi ezinhlungu. eboniswe Futhi kuyinto ekuphathweni izidakamizwa ukufukula ukusebenza evamile imisipha. Kufanele futhi asuse izimpawu zokuntula amanzi emzimbeni, uma ikhona.
Uma sikhuluma isimiso mechanical, ezimweni eziningi kubalulekile ukuba afeze ukuhlinzwa. Phakathi ukuhlinzwa, odokotela ukususa spikes noma imigwamanda angaphandle. Kwezinye izimo ngokwengxenye wamathumbu resection.
Wamathumbu isimiso nasemiphumeleni yaso
Ezigulini eziningi, ukuphathwa iphela ngempela ngempumelelo, kodwa kuphela uma ukwelashwa esifike ngesikhathi esibhedlela futhi ukukhethwa efanele ukwelashwa.
Uma imishanguzo kwenziwe, ukuvimbela kuholela eziyingozi kakhulu. Ngokwesibonelo, lapho ukwahlukanisa isilonda ngokuvamile iqala necrosis kwezicubu, okuyinto ke kuholela ukuthuthukiswa ukutheleleka. Kaningi ngalesi usesimweni ucala kutfutfukisa peritonitis - yisishiso ingaphakathi lesisu, okuyinto kunzima ukuyelapha.